USA, Britain & France oo ogolaaday in ay howlgal milatari ka fuliyaan Somalia (aqriso) - iftineducation.com
iftineducation.com – Ra’iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynayaasha France iyo Mareykanka Francois Hollande iyo Barack Obama, ayaa isku raaciyey inay madaxweynaha Somalia siiyaan kalamo milatari oo kooban.
Sida uu qoray wargeyska Daily Star ee Britain, saddexdan hogaamiye ayaa abuuray Koox ciidamo gaar ah oo fuliyo weeraro ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee dalka Somalia.
Ciidamadan isku dhafka ah ee ka socda saddexda dal, ayaa iminka dhoola tusyo ka sameynaya dalka Jabuuti, halkaasi oo ay horey u joogeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa France, islamarkaana ay kusoo biireen kuwa ka socda Britain.
Waxaa jira qorshayaal badan oo al dejiyey, waxaase ugu weyn ayada oo iminka ay socdaan qaadista sawirro sirdoon oo laga ururinayo saldhigada kooxda Al-Shabaab ee koonfurta Somalia, si howl gallo looga fuliyo.
Mas’uul British oo la hadlay Daily Star ayaa yiri “Al-Shabaab waa ay ogtahay sida aan u awoodno inaan dusha sare kala soconno, sidaa darteedna waxa ay iminka isku dayayaan inay qariyaan hubkooda muhiimka ah iyo madaxdooda sare”.
Qorshahan kuma koobnaan doono oo kaliya sida marar badan dhacday weeraro hawada sare oo kaliya ah, balse waxaa ku jira ciidamo dusha sare kasoo dega oo isku dayi doonna, haddii la helo bartilmamaeedyo muhim ah.
Weerarada hawada ah ayaa waxa ay noqo doonaan oo kaliya kuwa lagu caawiyo ciidamada dowladda Somalia, ayada oo dusha looga garaaci doono dagala yahanada Shabaabka, kadibna dhulka ay ka weerari doonaan, si ay u qabsadaan dhulalka ay iminka maamushi Shabaab.
“Howl galkan waa cir iyo dhul” ayuu yiri sarkaalka la hadlay Daily Star.
Go’aanka Hollande, Cameron iyo Obama ee ah in la caawiyo Somalia, ayaa yimid kadib weerarkii dhimashada badnaa ee kooxda Al-Shabaab ay ka fulisay xarunta ganacsi ee West Gate ee magaalada Nairobi.
Daawo Wariye Daahir Calasow oo Gabadh Waraysi Kaqaadaysay Shukaansi ugu Badalay Kadib Maxaa Dhacay(Video)